PSG oo wada dooneysa Kante, Kroos iyo Griezman… (Haddaba EEG sida ay u muuqan doonto Shaxdeeda 2019-2020!) – Gool FM
PSG oo wada dooneysa Kante, Kroos iyo Griezman… (Haddaba EEG sida ay u muuqan doonto Shaxdeeda 2019-2020!)
(Paris) 20 Maarso 2019. Kooxda kubadda cagta PSG ee ka dhisan Waddanka Faransiiska ayaa shaxdeeda ku soo darsan karta xilli ciyaareedka soo socda Kroos, Kante iyo Griezmann.
Naadiga reer France ayaa doonaysa inay si wanaagsan isku dhisto xilli ciyaareedka soo socda kaddib markii ay waxba ka keeni weysay tartanka Champions League xilli ciyaareedyadii dhowaa.
Kooxda horyaalka Ligue 1 ka dheesha ayaa rabta inay gacanta ku soo dhigto xiddiga kooxda Real Madrid ee Toni Kroos, waxaana ay ku soo qaadanaysaa 68 milyan oo gini kaasoo la filayo inay bedel uga dhigi doonto booska uu ka baxo Adrien Rabiot oo xagaagan ka tagi kara PSG.
Si la mid ah Toni Kroos kooxda Paris Saint-Germain ayaa rabta inay soo xero geliso laacibka khadka dhexe ee Chelsea, N’Golo Kante iyo weliba weeraryahanka ay isku xulka yihiin ee ka tirsan naadiga Atletico Madrid ee Antoine Griezmann.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida ay u muuqan doonto shaxda kooxda PSG 2019-20 marka lagu daro Kroos, Kante iyo Griezmann:-
Goolhaye: Alphonse Areola.
Difaacyada: Thomas Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat.
Khadka Dhexe: Toni Kroos, N’Golo Kante, Marco Verratti.
Weerarka: Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Neymar.
Real Madrid oo Raphael Varane u bandhigaysa mid ka mid ah kooxaha Premier League & Man United oo ay xaaladdu ku xun tahay
EEG sida ay noqon karto shaxda uu xulka qaranka England kala hortagi doono Jimcaha Czech Republic